၂၅.၆.၂၀၁၈. ပထမပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
ဥရုဂွေး ၃ - ဝ ရုရှား
ယခုပွဲနိုင်လို့အုပ်စု A မှာ ဥရုဂွေး အသင်းက သုံးပွဲကစားသုံးပွဲနိုင် ၉ မှတ် နဲ့ အုပ်စုပထမ၊ ရုရှား အသင်းက သုံးပွဲကစား နှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲရှုံး ၆ မှတ်နဲ့အုပ်စုဒုတိယ ရကာ ၁၆ သင်းရှုံးထွက်
ဂရိနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် ပြင်းအား ၅.၄ ပမာဏရှိသော ငလျင်လှုပ်
အေသင်၊ ဇွန် ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဂရိနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် ရစ်ချ်စတာစကေး ၅.၄ ပြင်းအားရှိသော ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ကြောင်း ဥရောပ မြေထဲပင်လယ်အနီးတဝိုက် မြေငလျင်ဗေဒစင်တာအရ သိရသည်။
၂၄.၆.၂၀၁၈. ဒုတိယပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
ဂျပန် ၂ - ၂ ဆီနီဂေါလ်
၂၄.၆.၂၀၁၈. ပထမပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
အင်္ဂလန် ၆ - ၁ ပနားမား
(၈', ၂၂'ပယ်နယ်တီ, (၇၈')
အုပ်စု G မှာ အင်္ဂလန်အသင်း က ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းနဲ့
အတူ နှစ်ပွဲကစားနှစ်ပွဲနိုင် ၆ မှတ်စီ နဲ့ ၁၆ သင်းရှုံးထွက်
အုပ်စု G ရဲ့ ပထမ နဲ့ ဒုတိယနေရာအတွက်မြန်မာစံတော်
ချိန် ဇွန်လ ၂၉ ရက် နံနက် ၁၂း၃၀ မှာကစားကြမှာပါ။
အမေရိကန်၏ဗိုလ်ကျမှုက အိပ်မောကျနေသည့် ဥရောပကို နိုးထအောင် နှိုးဆွပေးလိုက်သလို
ဘရပ်ဆဲလ် ၊ ဇွန် ၂၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်က ယခုလဆန်းပိုင်းတွင် ဥရောပသမဂ္ဂ(အီးယူ)မှတင်သွင်းသော သံမဏိအလူမီနီယံ ကုန်ပစ္စည်းများ အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်းကို လက်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အီးယူက ဇွန် ၂၂ ရက်မှ စ၍ အမေရိကန်မှတင်သွင်းသော တန်ဖိုးငွေယူရို ၂.၈ဘီလီယံရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းများကို အခွန်တိုးမြှင့် ကောက်ခံလိုက်သည်။ ယင်းနေ့တွင်ပင် အမေရိကန်သမ္မတ ထရန့်က အီးယူသည်ကုန်သွယ်ရေးတွင် အလျှော့ပေးနောက်ဆုတ်မှုများအလျင်အမြန်မပြုလုပ်ပါက အီယူးမှတင်သွင်းသော မော်တော်ကားများ ကို အခွန် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏တွစ်တာလူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားခဲ့ သည်။ ထိုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥရောပတွင် ဝေဖန်တုံ့ပြန်မှုများရှိခဲ့ပြီး အမေရိကန်က အီးယူကို ထိုးနှက် လိုက်သည့်ဤလုပ်ရပ်သည် ဥရောပသမဂ္ဂ(အီးယူ)ကို လက်မခံနိုင်အောင် ဖြစ်စေသည်ဟု ပြောဆိုမှု များ ရှိနေကြသည်။
ဗီယင်နာ၊ ဇွန် ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိုပက် (OPEC) အဖွဲ့ဝင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သည့်နိုင်ငံများက ရေနံထုတ်လုပ်မှုကို ပူးတွဲ တိုးမြှင့်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ဇွန်လ ၂၃ ရက်က ကတိပြုခဲ့ကြသည်။
၂၃.၆.၂၀၁၈. ဒုတိယပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
မက္ကဆီကို ၂ - ၁ တောင်ကိုရီးယား
မက္ကဆီကို အသင်း ကအုပ်စု F မှာနှစ်ပွဲကစား နှစ်ပွဲနိုင်နဲ့၁၆ သင်းရှှုံးထွက်နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်ဖို့သေချာသွားပါပြီ။ တောင်ကိုရီးယားကတော့ နှစ်ပွဲရှုံးသွားလို့ အုပ်စုအဆင့်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ရတော့မှာပါ။ (Xinhua)
၂၃.၆.၂၀၁၈. ပထမပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
ဘယ်လ်ဂျီယံ ၅ - ၂ တူနီရှား
ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းက အုပ်စု G မှာနှစ်ပွဲကစားနှစ်ပွဲနိုင်၆ မှတ်နဲ့ ၁၆ သင်းရှုံးထွက်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားပါပြီ။ (Xinhua)
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန် တောင်ကိုရီးယားနှင့် ရုရှား သမ္မတတို့ ကတိကဝတ်ပြု
မော်စကို၊ ဇွန် ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ မွန်ဂျေအင်တို့သည် ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း ကရင်မလင်နန်းတော် က ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံ တွင် ဓါတ်ငွေ့အိုးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၁ဦးသေ၊ ၉ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
ရုရှားနိုင်ငံ တာတာစတန် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ရှိ အဆောက်အအုံတစ်လုံးတွင် ဓါတ်ငွေ့အိုး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူ တစ်ဦးသေဆုံးပြီး အခြားလူ ၉ဦး ကို ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ခု က ဇွန် ၂၂ ရက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။